Izindaba - Izindleko zomshini wokudubula ongabizi kakhulu, i-one stop get
Ukubhekana nesimo semakethe esiya siba sibi kakhulu ezimbonini ezahlukahlukene, izinkampani zibeke phambili izinselelo eziphakeme ezindlekweni zokukhiqiza kanye nezidingo zekhwalithi yomkhiqizo. Inqubo yokuqhumisa ngenqubo yokukhiqiza iyisixhumanisi esibalulekile esithinta izindleko zomkhiqizo nokulawulwa kwekhwalithi. Kuhleumshini wokuqhuma wokudubulafuthi ukumisa okungabizi izingxenye ezisele kudlala indima ebalulekile ekusebenzeni okuzinzile nokusebenza kahle kwemishini yokuqhumisa. Kuyisici esiqondile esithinta ukusebenza kwe-umshini wokuqhuma wokudubula kanye nezindleko zokudubula.
Izindleko zezingxenye zokungcebeleka ikakhulukazi ukubonakaliswa kokusebenza okuphelele kwezindleko, futhi kuthinteka kakhulu yikhwalithi yangaphakathi. Izingxenye zokugcina ezisezingeni eliphakeme ezikhiqizwa yinkampani ye-TAA zinejubane eliphakeme lokuqhuma namandla amakhulu wokuqhumisa ngamandla afanayo, ukusebenza kahle kokuqhumisa nekhwalithi yokuqhuma kuphakeme.Ihlukaniswe ngezigaba ezimbili: ukubumba ukubumba kanye nemishini yokubumba. Ikhetha izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme futhi isebenzisa ubuchwepheshe bokuthuthuka bokushisa ukuze kulawulwe ngokuqinile ubulukhuni kanye nokwakheka komkhiqizo, kukwenza kube nempilo ende nezindleko zokusebenza okuphezulu.
Ngeminyaka yesipiliyoni nobuchwepheshe embonini yokwelashwa ebusweni, sinomklamo wobungcweti neqembu le-R & D kanye nesikhungo esizimele sokudubula i-R & D. Yonke imikhiqizo ingathunyelwa ngemuva kokuhlolwa okuqinile komkhiqizo, ukufakwa nokususa amaphutha ngaphambi kokushiya ifektri.
Inqubo yokukhiqiza ngayinye yezingxenye zethu zokungcebeleka idlulise inqubo eqinile yokulawula ukukhiqizwa kanye nezinqubo zokuhlola ikhwalithi. Amamodeli aphelele futhi angahlelwa futhi ngokuya ngezidingo zomsebenzisi. Lokhu kunganciphisa kakhulu izindleko zezingxenye nobuningi bokugcinwa kwemishini, ngaleyo ndlela kunciphise izindleko zabasebenzi zesondlo Futhi kunciphise izindleko zesikhathi sokuphumula.
I-TAA Metal ibibambe iqhaza elikhulu embonini yokuqhuma isibhamu iminyaka engaphezu kwengu-40 futhi isebenzele amakhasimende amaningi. Le nkampani inonjiniyela abangochwepheshe abaphezulu abangochwepheshe abajwayelene namamodeli ajwayelekile asekhaya nakwamanye amazwe, futhi abenza ukusetshenziswa kweukudubula ama-abrasives, ukwesekwa kwezobuchwepheshe bemishini, nokuthuthukiswa komshini wokuqhumisa. Kokubili isipiliyoni nobuchwepheshe bunokwethenjelwa futhi kungakusiza ukuthi "uvimbele inkinga encane futhi uxazululeke kalula ngezinkinga ezinkulu" zemishini yakho.